किन एक भए तीन कोइराला ? यस्तो छ कारण – NepalayaNews.com
किन एक भए तीन कोइराला ? यस्तो छ कारण
१० भाद्र २०७४, शनिबार ०४:४६
काठमाडौं, भदौ १० । कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला निवास महाराजगन्जमा शुक्रबार तीन कोइराला (शशांक, शेखर र सुजाता) एउटै मञ्चमा देखिए । यो एउटा संयोग भने थिएन ।
पाँच साताअघि पारिवारिक रुपमा महामन्त्री शशांकको टोखास्थित निवासमा ‘लन्च मिटिङ’ गरेका तीन कोइरालाले औपचारिक रुपमै एक भएको सन्देश सार्वजनिक गर्न त्यस्तो अवसर खोज्दै थिए, जुन अवसर पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई स्वागत गर्ने बहानामा शुक्रबार मिलेको थियो ।
निमन्त्रणा गर्दा नै पत्रकारसंग तीन कोइरालाको कुराकानी भनेर बोलाइएको थियो र कार्यक्रमलाई पनि त्यहि हैसियतमा औपचारिकता दिइयो ।
तीन कोइरालालाई एकै ठाउँमा राख्न घरमै मञ्च खडा गरियो । जसमा शशांक, शेखर र सुजाता क्रमश बसे ।
बायाँपट्टी पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित सभापति गोविन्द आचार्य र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महत थिए ।
पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रम भनिए पनि पार्टीका नेता र मन्त्रीहरुको पनि उपस्थिती थियो ।
कार्यक्रम सुरु हुनुअघि एकैछिन घरभित्र तीन कोइराला बसे र महामन्त्री शशांकले मात्रै कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने सहमति गर्दै बाहिर निस्के ।
कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिदै पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई सम्मान गरियो र त्यसपछि महामन्त्री शशांकले मात्रै मन्तव्य राखे ।
तीन कोइरालाको आयोजनामा बोलाइएकाले उपस्थित पार्टीका अन्य नेताहरुले त्यहाँ बोल्ने अवसर पाएनन् ।
कांग्रेस महामन्त्री शशांकले बोल्दै गर्दा शेखर र सुजाताको हाउभाउ र कानेखुशी रोचक बनेको थियो ।
सभापति शेरवहादुर देउवालाई गलत ‘फहमी’ नहोस् भन्नकै लागि महामन्त्री शशांकले देउवा निकट नेता महतलाई विहानै कार्यक्रममा उपस्थित भईदिन आग्रह गरेका थिए ।
‘मलाई त पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले आयोजना गरिएको कार्यक्रम भनेर आएको हुँ’ महतले भने,‘तर कार्यक्रम सुरु हुँदा नै तीन कोइरालाको आयोजना भनियो ।
सायद तीन कोइराला एक भएको सन्देश दिन त्यस्तो गरिएको होला । अरु त थाहा भएन ।’
पारिवारिक बैठक भनिए पनि भावी दिनमा पार्टी नेतृत्वको मार्गचित्र तय गर्न कोइराला परिवार एक भएको बुझाइ कांग्रेस नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।
‘देशभरका नेता कार्यकर्ताले कोइराला परिवार मिल्नु पर्‍यो भन्दै दबाव दिन थाले, हामीबीच त्यस्तो तिक्तता त थिएन तर एक भएको सन्देश दिनपनि यस्तो मिटिङ राखिएको हो’ केही दिन अघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा शेखरले भनेका थिए ।
१३ औं महाधिवेशनसम्म पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न यिनै तीन कोइरालाबीच भित्रभित्र चर्कै टकराब थियो । तीनै जना महामन्त्रीका दावेदार थिए ।
प्रतिस्पर्धाको टकराबबीच मिल्दै आए पनि हार्दिकता थिएन । भेटघाट र कुराकानी पारिवारिक जमघटमा सिमित थियो । राजनीतिक कुराकानी हुन्थेन ।
‘अहिले तीन कोइरालाबीच हार्दिकतामात्रै छैन, राजनीतिक कुराकानी बढी, बरु पारिवारिक कुराकानी कम हुन थालेको छ’ शशांक निकट रहेका एक नेता भन्छन,‘ तीन जनाबीच आगामी महाधिवेशनसम्म कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिषयमा छलफल हुन थालेको छ ।’ -कान्तिपुर दैनिकबाट
जोरबिर राईको पहलमा छ लाख आठ हजार सहयोग संकलन १० भाद्र २०७४, शनिबार ०४:४६
अनेसासले गर्यो दसैँ शुभकामना कार्यक्रम १० भाद्र २०७४, शनिबार ०४:४६
जी पि कोइराला फाउन्डेसन अमेरिकाले १२०० ग्यालन शुद्ध दूध नि:शुल्क वितरण गर्‍यो। १० भाद्र २०७४, शनिबार ०४:४६